Ukupheka kwemithi yendabuko | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Isigaba Ukupheka kwemithi yendabuko
Zonke izakhiwo eziwusizo zama-mandarins nezinkampani eziphikisanayo
I-Mandarin iyisihlahla esivundlile esivundwe sobukhulu obukhulu (kuze kube ngamamitha amane ukuphakama) noma isihlahla. Izithelo ze-Citrus zifinyelela ngamasentimitha ayisithupha ngokuzungeza. Ukuma kwesithelo kufana nebhola le-oblate ngenhla nangaphansi. Isikhumba sesithelo sincane, sinamathele kuma-lobules. Isithelo sinezinhlamvu ezingu-8-13, ezinamanzi futhi ezinomnandi noma omuncu-okumnandi ukunambitha.
Isiraphu yaseSiriya: izisetshenziswa, izidakamizwa nezingozi
Umnikezi waseSyria akahlangene noSiriya, ngoba lo mtholi udidekile naye nge-kutra, isitshalo saseMpumalanga Ephakathi. Lesi sitshalo siphinde sabizwa ngokuthi utshani obumile, futhi luhlala isikhathi eside. Umenzi weglavu wesigriyamu ungena emndenini wase-Kutrov futhi unencazelo elandelayo: Lesi sitshalo sikhula kufika ku-2 m. Amaqabunga awo avulekile, afana neqanda elisezingeni futhi akhule afike ku-25 cm ubude no-12 cm ngobubanzi.
Ngingayithatha nini, yini ewusizo futhi indlela yokupheka ukukhulelwa kwe-dogrose
Isibungu singenye yezinhlobo zasendle ezihlahleni emndenini wasePenic. Nakuba, ukubiza lesi sitshalo sasendle manje akuyona into ephelele, ngoba emakhaya amaningi nasezindlini zasehlobo zase kakade zikhulile njengesiko. Ake sikhulume ngezinto ezizuzisayo ze rose rose, ikakhulukazi, mayelana nokukhipha izingxenye zayo.